» मेरो मृत्यु पनि तिमिलाई उत्सव बनोस्
मेरो मृत्यु पनि तिमिलाई उत्सव बनोस्
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार २३:२१
हृदयभरिको अथाह प्रेम समेटेर यो पत्र लेख्दै छु। क्यान्सरले बिछोडिन लागेको यो मोडमा तिमीले यो पत्र प्राप्त गर्दा म विलीन भइसकेकी हुनेछु। त्यसैले आज अन्तिम पत्र लेखेर बिदा लिँदै छु।
क्यान्सरले छियाछिया बनेको मेरो शरीरलाई एउटा नयाँ ताजगी दियौ। रुग्ण बनेको मेरो मस्तिष्कमा चेतना अनि विश्वासको किरण छरिदियौ। मात्र दुई महिनाअघि पार्कको त्यो बेन्चमा म बसेकी थिएँ। सन्ध्याकालीन समयमा तिमी आयौ। तत्पश्चात् सुरु भयो, हाम्रो मन अनि चेतनाको समागम यात्रा। मैले यही नै सिकँे कि लामा वर्षहरूमा बाँच्नुभन्दा प्रत्येक नवीन पल जीवन जिउने कोसिस गर्नुपर्छ।
प्रेमांशु ! म यही चाहन्छु। तिमी पूरा जीवन बाँच। जीवनबाट विमुख बनेकी मलाई जीवनप्रति अभिमुख गराएर तिमी कसरी जीवनबाट टाढा भाग्न सक्छौ र ? म गएको देख्न नसकेर आज अन्तिम समयमा तिमी कतै टाढा छौ। अनि त म यो पत्र लेख्न बाध्य छु। तिमी कदापि पनि नहारीकन, नथाकीकन अनि नझुकीकन बाँचिराख्नू, है ! सायद यही नै तिम्रो–हाम्रो प्रेमप्रति अमिट श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
मेरो एउटा अन्तिम इच्छा माछौ ? सन्ध्या आरती होस्, पशुपतिनाथको आराधना होस्, बाग्मती उही गतिमा बगिरहेको होस्, बस् त्यही क्षण आर्यघाटमा चितामा मेरो शरीर स्थित होस्। कोही अरूले होइन, तिमीले मलाई मुखाग्नि दिनू। त्यस समय आनन्दविभोर भएर मेरो शरीरलाई अन्तिम बिदाइ दिनू। चितामा रहेको देहलाई आगोले आफूभित्र समाहित गर्दा त्यो एक उत्सव देखियोस्। अग्निलाई पनि गौरव अनुभूति होस्, किनकि एक छोटो सार्थक जीवन बाँचेर त्यो देह विलीन हुनेछ। मेरो अन्तिम संस्कार सार्थक जीवनको बिदाइको उत्सव बनोस्। मेरो आत्माले शरीरलाई सगौरव बिदाइ नदिएसम्म, अनि मृत्युलाई एक अन्तिम उत्सव नमानेसम्म पार पाउनेछैन। जसको पूरा जीवन उत्सव बन्यो, उसको मृत्यु कसरी उत्सवविमुख हुन सक्छ ? मेरो शेष खरानी उही बाग्मतीमा प्रवाहित गरिदिनू। म आराम चाहन्छु। यसकारण बाग्मतीले मलाई जता लानेछ, उतै जानेछु।
अनि म समय र स्थानभन्दा पर पुग्नेछु। अस्तित्वको हिस्सा म यसैमा त विलीन हुनेछु। बाचा गर, प्रेमांशु ! जीवनलाई उत्सव बनाएका तिमीले मेरो मृत्युलाई पनि उत्सव बनाउन सहयात्री बन्नेछौ।